အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ယောက်ျားတို့ ရဲ့ သဘောထားများ
နန်းညီ ရဲ့ အတွေးချာလည် ကိုဘတ်ပြီး ကိုယ်လဲ အတွေးတွေ ထပ်ချာလည် သွားပြန်ပါတယ်။
ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေအများစုမှာ ဆိုရင် အမှန်တရားတွေ (ယောက်ျား မကောင်းကြောင်း) များပါတယ် လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထင်နေတတ်ပါတယ်။ အဆိုးမြင်နေသလိုတောင် ဖြစ်နေတာလားလို့ ဒါပေမယ့်လဲ ယောက်ျား ကောင်းဆိုတာ က မတွေ့မိသလောက်ရှားနေပြန်တယ်။ တော်ရင် မောက်မာ ဂုဏ် မာန်တက် မတော်ရင် ညံ့ မညံ့ရင် ဖျင်း မဖျင်းရင် ပျင်းဆိုသလိုတွေချည်းပဲ။ အခု မိညီမ ရဲ့ အတွေးတွေကို ဘတ်မိတော့ ထပ်ဆင့်တွေးမိတာတွေ ရှိလာပြန်ပါတယ်။
ယောက်ျားတွေ ရဲ့သဘောထားတွေပေါ့။ ကောင်းတယ်ဆိုးတယ် သတ်မှတ်တဲ့ သဘောထား။ သင့်တော်တယ် တည့်မှန်တယ် ဝေခွဲပိုင်းခြားတတ်တဲ့ သဘောထား၊ မြင့်မြတ်တဲ့ နိမ့်ကျတဲ့ သေးသိမ်တဲ့ သဘောထား စတာတွေကို မီးခိုးကြွက်လျောက် လျောက် စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ တခု ပြောရရင် ယေဘုယျ အားဖြင့် တပြိုင်တည်းမှာ ကောင်မလေး အများကြီး ထားတဲ့ ယောက်ျားက တပြိုင်တည်း ကောင်လေး အများကြီး ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ထက်များတာ အမှန်ပဲ။
ကိုယ် လူကြီးတယောက်ကို သိတယ်။ မိန်းမရှိတယ်။ မယားငယ်လဲရှိတယ်၊ ကြားထဲမှာ “ကောင်မလေး” ဆိုတာတွေလဲရှိတယ် ပြီးတော့ ကြေးစားကောင်မလေးတွေဆီလဲ ခဏခဏ သွားတယ်။ သူနဲ့ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအတွက်၊ သူ့ သူငယ်ချင်းပေါင်းအသင်းတွေအတွက် ဒီကိစ္စတွေဟာ ထမင်းစားရေသောက်ဘာမှ မထူးခြားသလိုပဲ။
ကြည့်ရတာ ယောက်ျားတွေ ရဲ့သဘောထားက ကြေးစားသွားရှာတာ သေးသိမ်တဲ့ အလုပ်လို့ မခံယူဘဲနဲ့ ကြေးစားကို စားပြီး ပို်က်ဆံမပေးတာက မှ သေးသိမ်တယ် လို့သတ်မှတ်သလား မသိ။ ကိုယ်တောင် တကယ်တာဝန်မယူနိုင်ဘဲ ရည်းစားနဲ့ နေတာ ထက်စာရင် ကြေးစားရှာတာ ကို အားပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိညီရေးသလိုကြေးစား ရှာပြီး ပိုက်ဆံတောင် မပေးဘဲ ကားပေါ်က ကန်ချတယ်ဆိုတော့ တော်တော် ကို သေးသိမ်ညံ့ဖျင်းတဲ့ ထဲရောက်သွားပြီ။ တကယ်ပါ ကိုယ် အရင် က တိုးဂိုက်လုပ်ဖူးတော့ ကြေးစားကောင်မလေးတွေနဲ့ ဒွေးရောယှက်တင် မောင်နှမတွေ လိုကို နေဖူးပါတယ်။ ကိုယ်က သမီးလေးတွေလို သဘောထားတာပါပဲ။ တခါတခါ မြန်မာပြည်မှာ အဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ တော်တော် ကိုခက်တယ် ခဏခဏ ကြားရတယ် တယောက်ထဲပါလို့ပြောပြီး ခေါ်ကြ ပြီးတော့ အုပ်စုလိုက်လုပ်ကြတာ။ သူများတွေလဲ ပိုက်ဆံရှာနေတာပဲ ကို်ယ်ချင်းစာသင့်တယ်။ အဲ့တာ လုပ်အား အမြတ်ထုတ်တာထက်ပိုဆိုးတာပဲ။ နောက်ပြီး ကိုယ်တွေ့ဖူးသလောက် အဲ့တာမျိုးက မြန်မာပြည်မှာဘဲ ရှိတယ်။ တွေးကြည့်ရင် ပြောစရာတွေအများကြီး ထွက်လာအုံးမှာ။
တချို့ ယောက်ျားတွေ သူများ မယားကို ကြာခိုတော့ ပြုံးပြုံး နဲ့ ပြောလိုက်သေးတယ် ဒုသနသော ကို ဘာတဲ့ ဒုတိယ ယောက်ျားက သေတော့ သောတပန်တည်တယ်ဆိုပဲ အဲ့လို ယောက်ျားမျိုးပဲ ကိုယ့်မယား ပါသွားတော့မှ တုတ်တပြက်ဓါးတပြက်တွေဖြစ်တာ။
ယောက်ျား ကောင်းတော့ မောင်းမ တထောင်တဲ့ မိန်းမတယောက်များ ရည်းစားများမိရင် မိန်းမပျက် လောက်ကုို အပြောခံရတာ။ ရှိသေးတယ် ယောက်ျားတွေ နှာဘူးထတာ အဲ့တာ ယောက်ျား စစ်လို့တဲ့။ ယောက်ျားတွေ ရည်းစာများရင် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်တဲ့ မိန်းမတွေ ရည်းစားများတော့ မျက်နှာများတာတဲ့ အရပ်ပျက်တဲ့။
ဒါပေမယ့် သေချာတာ တခုတော့ ရှိတယ် အဲ့လို သဘောထားတွေ ရှိတတ်တဲ့ မဟာယောက်ျားတွေပဲ သဘောထားပြောင်းသွားတဲ့ အချိန်လေ။ အဲ့တာကတော့ သူတို့အိမ်ထောင်တွေဘာတွေကျလို့ သမီး မိန်းကလေး မွေးလာတဲ့ အချိန်ပေါ့။ အဲ့အခါကျတော့ သူတို့လူပျို လူလွတ်ဘဝ က ထားခဲ့တဲ့ သဘောထားတွေ သူတို့ သမီး ကို လာပတ်မယ့် ကောင်လေးတွေကျရင် ဘယ်လို သဘောထားနိုင်မလဲ ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ အော် နောက်ဆုံးတော့လဲ ကာလဝိပတ် နောက်ပိုးတက်ပဲလေ။
ခရစ္စတီးနား ရဲ့ စာသား တခု ကိုတောင်သတိရမိသေးတော့တယ် ဘတ်ကြည့်ပါအုံး......
He can either give us some head, sexaroar
It's airight though, you can't hold me down
Should out loud!
စိတ်ကမပျော်ဖြစ်နေတော့ အချဉ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ရေးလို်က်တယ် ပြီးတော့ မှ အော် ငါတော်တော် အဆိုးမြင်တတ်ပါလားလို့.......ခုတလော အကျိုးရှိတဲ့ စာလဲ မရေးဖြစ် ရသ ပေးနိုင်တဲ့စာတောင် မရေးဖြစ်ပဲ အကုသိုလ်တွေပဲ များနေမိတယ်။
Posted by တီချမ်း at 12:26 PM
Snow August 2, 2011 at 2:37 PM
လူကောင်းနဲ့ လူဆိုး ရောနေတာကိုက လောကကြီးပါပဲလေ။ ဒီအထဲမှာမှ လူဆိုတာက အဆိုးဘက်ကို ပိုအားသာကြတာကိုး။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာကိုယ်ပဲ ပြန်ရမှာပဲ။ ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဆိုတော့ လောကကြီးက အချိန်တန်တော့လည်း မျှတသွားတာပါပဲ။
ရောင် August 2, 2011 at 2:39 PM
ဒါလည်း မှန်နေတာပဲ တီ... ဘာဆက်ပြောရမှန်းတောင် မသိဘူးလေ..။
sweetpeony August 2, 2011 at 2:49 PM
တီမှန်၏.. တိုးတိုး တိတ်တိတ်နဲ့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲကွာမယ်ထင်ပါရဲ့...။
တီချမ်း August 2, 2011 at 3:13 PM
အို အမြဲ မှန်နေတာပဲ
အပေါ်ဆုံးညာဖက်ထောင်.မှာရေးထားတာ “ပုကောက်လန်”ဆိုတာဘာလဲဟင်။ပြီးတော. အောက်ကစာသားတွေကဘာတွေလဲ။
Anonymous August 3, 2011 at 11:39 AM
It's true, Nar. I mean their characters!
တီချမ်း August 3, 2011 at 1:35 PM
အော် ပုကောက်လန် ဆိုတာ တရုတ်လို ကြော်ငြာ သင်ပုန်း ကိုခေါ်တာပါ
တခါတခါ လောလောဆယ် တီဖြစ်နေတာတွေလဲပါတာပေါ့
တီချမ်း August 3, 2011 at 5:26 PM
Thet Nandar and Eno Spirit like this.
Phyo Maw Aung ဟာသ တစ်ခုရှိတယ် သော့တံတစ်ချောင်းက များများဖွင့်နိုင်ရင် မာစတာကီးတဲ့ အဲ တကယ်လို့ သော့ပေါက်က သော့တံတိုင်းဖွင့်လို့ရသွား​ရင် သော့ပျက်တဲ့...။
Yesterday at 2:38pm · LikeUnlike · 1 personLoading...
Addy Chen သိတယ် အဲ့တာလဲ ယောက်ျားမိန်းမ လိင်ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်တာ ကို လုပ်ထားတဲ့ ယောက်ျားဘက်ပင်းတဲ့ ဟာသပဲ
Yesterday at 2:41pm · LikeUnlike ·2peopleEno Spirit and Lwin Mar Aung like this.
Phyo Maw Aung ဟာသက သတိရလို့ ပြောတာပါ။ တကယ်ပြောချင်တာက မီဒီယာ ချာတဲ့အကြောင်းပေါ့။ ဥပမာ စားသောက်ဆိုင်မှာ သီချင်းဆိုရင် အပြန်ကျ မူးနေတဲ့ လူ ၃ ယောက်လောက်က စောင့်ပြီး ရစ်တာမျိုး ခပ်ရိုင်းရိုင်းလုပ်တာမျိုး​ ရိုက်ပြတာ သုံးလေးကား ကြည့်ဖူးတယ် မရှိသင့်တဲ့အရာတစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ရိုက်ပြတာဟာ အားပေးရာရောက်တယ် မထင်ဘူးလား နောက် ဒီလိုမျိုး တကယ်လုပ်လို့ရလား ဆိုတာလိုလို ထင်ရောင်ထင်မှား မေးခွန်းတွေ အတွေးတွေဖြစ်စေသလိုပဲ
Yesterday at 2:44pm · LikeUnlike · 1 personLoading...
မဟုတ်ဘူး မှားတယ် ဒီအပြောမျိုးက ဂျူး ကြောင့် လစ်ဗင်းတု ရှစ်ပဲသားတွေ များကုန်တော့မယ် လို့ ပြောတဲ့ အပြောမျိုးပဲ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေညံ့တာ​ ဟုတ်တယ် ဒါကြောင့် အဲ့ဒီရုပ်ရှင်တွေအကြည့်များတဲ့ မြန်မာယောက်ျားများ ထိုထိုသော စိတ်ဓါတ်တွေဝင်လာတယ်... ပြောရင်တော့ ကိုယ်လက်မခံဘူး စိတ်ဓါတ်သေးသိမ်သော ယောက်ျားတွေ က သူတို့ နဂို ကိုက စိတ်ဓါတ် ကိုယ်ခံအား မကောင်းလို့ ပဲ အဲ့တာတွေက ပြောရင်တော့ အကြောင်း အများကြီး ပေါ်မူတည်မယ် ခုန ဖမ ပြောတာတွေက မရှိသင့်တာ ကို ရိုက်ပြတယ် ပြောပေမယ့် ရှပ်ရှင် ဝတ္ထု အများစုဟာ အပြင်က ဟာတွေကို ရီဖလက် လုပ်ပြီး ရိုက်နေတယ် ဆိုတာ ကိုလဲသတိချပ်ရမယ် နည ပိုစ့်မှာပဲ ကြည့် အပြင်မှာ ရှိလို့ကို အဲ့လို အနှောင့်အယှက် ပေးခံရတာလေ သူတို့ က လျှပ်ပေါ်လော်လည်နေတဲ့ ကောင်မလေးတွေမဟုတ်တာ ပေါင်းဘူးတဲ့ သူတွေသိမယ် ဆိုလိုတာ သူတို့အနေအထိုင်မတတ်လို့​ အစ ခံရတာ မဟုတ်ဘဲ နဲ့ စတဲ့ စဖို့ ကြံစည်တဲ့ ယောက်ျားတွေကိုယ်က စိတ်ထား ညံ့တယ် ပြောချင်တာSee More
Yesterday at 2:47pm · LikeUnlike ·3peopleThet Nandar, Aye Myat Myat Ko and Nang Nyi like this.
Phyo Maw Aung
အင်း ဆိုလိုချင်တာက မဟုတ်တာကို ဟုတ်တာနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းသင့်တာကို ပြောချင်တာ။ ဂျူးစာကြောင့် စုံတွဲတွေ အတူပဲနေနေ မနေနေ ဒါက အသက်ပြည့်တဲ့ လူ ၂ ယောက်ရဲ့ လွပ်လပ်ပိုင်ခွင့်လို့ ယူဆတယ် ဒါဟာ ထည့်ပြောစရာ ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့။ ပြောချင်တဲ့ မီဒီယာကို မြင်သ...ာအောင် ဆက်ရရင် လမ်းမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စာလိုက်ပေးတယ် မယူတော့ ဆွဲလားရမ်းလားလုပ်တယ် မင်းသားက ဝင်ထိုးတယ် ဒီနေရာမှာ တင် ဒါက အဓိပ္ပါယ် တော်တော်မဲ့သွားပြီး ဆွဲလားရမ်းလား လုပ်တာဟာ မင်းသားရှိမှ အထိုးခံရမယ့်ကိစ္စမျိုးလိုလို ဖြစ်သွားပြီ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အလိုမတူပဲ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားဖို့ ကြိုးစားတာဟာ ဘယ်လောက် ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို မင်းသားဝင်ထိုးလို့ လူမိုက်ထိုးခံလိုက်ရတာလောက်​ ပြတာမျိုးဟာ လူအဆင့်အတန်းသိပ်ညံ့ကြောင်း​ ပြရာကျတယ် မထင်ဘူးလား။See More
Yesterday at 2:52pm · LikeUnlike · 1 personAye Myat Myat Ko likes this.
Phyo Maw Aung အင်း တကယ်တော့ ကိုယ်ပြောချင်တာကို ဘယ်အရာနဲ့ တွဲပြောရမလည်း မသိပါဘူး ရုပ်ရှင်လောက်ကို မီဒီယာ အနေနဲ့ ပြောရတာ ခက်ပါတယ်။
Yesterday at 2:54pm · LikeUnlike · 1 personLoading...
Addy Chen ဟုတ်တယ် ယောက်ျားတွေ သဘောထားကြီးမြင့်တာ ကို တခြားနည်းနဲ့ ပြောရမယ် ပြန်ခြေပ ရမယ် မြန်မာကားတွေ တော့ သိပ်မကြည့်နဲ့ ချစ်လို့ ပြောတယ်မှတ်ပါ...ဖမ ပြောချင်တာ ကို မြင်တယ် သို့သော် ခုပြောနေတာ နဲ့ တော့ အကောင်းဆုံး ဥပမာ လို့ပြောမရဘူး လို့ ထင်တယ် သို့မဟုတ် သင့်တော်သော ဥပမာ မဟုတ်သေးဘူး
Yesterday at 2:57pm · LikeUnlike · 1 personLoading...
တီချမ်း August 3, 2011 at 5:27 PM
အင်း ဟုတ်တယ် တွေးကြည့်ရင် ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ ဥပမာ မဟုတ်ဘူး။ အနုပညာပိုင်းကို ဝင်စွက်လို့ မဖြစ်ပြန်ဘူး။ မြန်မာကားက သူများပြမှ ကြည့်ဖြစ်တာပါ။ ကိုယ်ကြည့်မိတဲ့ကားတွေမှာ အဲလိုတွေ မြင်ရတာ ပြောရရင်တော့ စိတ်ပျက်သွားတာမျိုး ခံစားရတာ အနီးစပ်ဆုံး ပြောရရင် ...ဒီလိုပဲ မတရား လုပ်လို့ရလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး ကြည့်နေရင်း မေးဖြစ်တာ။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတော့ ထည့်ရေးမိသလို ဖြစ်သွားကော။ ကိုယ့်အနေနဲံ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ဖြစ်တာကို ထုတ်ဖော်ပြောရတာ အားမရပါဘူးကွယ် lolz စကားတွေများလို့ စာရှည် ကော်မန့်မှာ ရှုပ်ကုန်ပြီ =)See More
Yesterday at 3:01pm · LikeUnlike
Addy Chen အမှန်က မြန်မာမိန်းကလေးတွေသိုင်းေ​ လာသ သမီးတွေလို သိုင်းပညာ သင်ထားသင့်တယ် အဲ့တာမှ အကောင်တွေကိုယ့်ကို လာနှောင့်ယှက်တော့လဲ ယိစ် ဝှစ် စသဖြင့် မည်ကဲ့သို့ လုပ်လိုက်သည်မသိ သကောင့်သားများ မှောက်သွားလေသည် ဖြစ်ရမှာ ယောက်ျားလေးတွေ ကို သူတို့ကတောင် ပြန် ကူနိုင်အုံးမယ်
Yesterday at 3:05pm · LikeUnlike ·2peopleLoading...
Aye Myat Myat Ko ဒဲ့ပြောရရင်တော့ အများစုသော မြန်မာ ယောက်ျားတွေ (အားလုံးမဟုတ်ဟု မှတ်ပါလေ)ဟာ အများစုသော စင်ကာပူယောက်ျားတွေထက် မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကာယကံ၊ ဝစီကံ ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ နိမ့်တယ်။ (မနောကံပါ ပါမှာပဲ)။
Addy Chen ဟုတ်တယ်
Yesterday at 3:05pm · LikeUnlike
Addy Chen အဲ့တာ က ကမ္ဘာနဲ့တောင် ယှဉ်ပြီး ပြောရမယ် ထင်တယ် သို့သော် အရှေ့တိုင်းမှာ ပိုများမှာပါ ကိုယ်တွေကြည့်နေကြ အင်္ဂလိပ်ကား အများစု မှာတော့ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေကို ဦးစားပေးတာ နေရာပေးတာ အခွင့်အရေး ပိုပေးတာ တွေက ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာမို့လို့​လား တော့မသိ အဲ့လိုပြောရင်လဲကိုယ်တြွေ​မန်မာကားတွေပဲ နောက်ကောက်ကျပြန်မယ်
Yesterday at 3:06pm · LikeUnlike
Aye Myat Myat Ko ဟုတ်တယ် လောလောဆယ်မှာ တိုင်းပြည်က အဖတ်ဆယ်မရတဲ့ အနေအထား။ ဆိုလိုတာက မိန်းကလေးတွေ ထိကပါး ရိကပါးလုပ်ခံရတာ (ပါးစပ်နဲ့ဖြစ်စေ) ကို ဥပဒေနဲ့ ထိန်းပေးဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မိန်းကလေးတွေတိုင်း ကိုယ်တိုင် ပြန်ဆော်နိုင်အောင် ကိုယ်ခံပညာတခုခု တတ်ထားအောင် သင်ကြဖို့ ကောင်းတယ်။
Yesterday at 3:07pm · LikeUnlike
Addy Chen အဲ့တာကြောင့် ကိုယ်တွေအရင် အလုပ်မှာ တုံးက GPT ဆိုပြီး သင်တာရာ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ကာကွယ်နည်းထဲမှာလေ grab pull and twist တဲ့ စဉ်းစားပြီး တော်ရာ သုံးပါလေ.....
Yesterday at 3:09pm · LikeUnlike
Aye Myat Myat Ko ကိုယ်သာ ဗမာပြည်မှာ အာဏာရကြည့် အရင်ဆုံး အဲဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းမယ်။ တော်တော်ကို မှတ်လောက်သားလောက်နည်းနဲ့ လုပ်မှာ။ ဥပမာ - မိန်းကလေးတယောက် ဖြတ်သွားတာကို သီချင်းစောင်းမြောင်းဆိုတာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ နညတို့လို ကြုံခဲ့ရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် အတိုင်ခံရရင် အတိုင်ခံရတဲ့ အကောင်တွေကို ထုတ်တန်းမှာ ဇောက်ထိုးဆွဲပြီး လူမြင်ကွင်းမှာ တပတ်လောက်ထားမယ်။
ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့ လူက အဲဒီကောင်ကို ကြိုက်တာလုပ်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာမျိုးကို လုပ်ပြထားမယ်။
Yesterday at 3:09pm · LikeUnlike · 1 personLoading...
Addy Chen အင်း ဒေါ်ရီတာ အဲ့လိုပြောမှ အရင်က ကိုယ်လဲ အဲ့လိုပြောဖူးတာ သတိရတယ် ကိုယ်သာ အာဏာ ရှိရင် အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားတွေကို ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ကြိုက်သလို ဘလက်ကာယ လုပ်ခွင့်လိုင်စင်နဲ့ ပေးမယ် လို့ ဥပမာ ကောင်လေး က ဘာလုပ်တာလဲဗျ ဆိုရင် ဘာမှ ပြန်ပြောစရာမလို ဘူး လိုင်စင်ပြပြီး လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာ လို့ပြောနိုင်စေရမယ် မှတ်ထား ဟိဟိ
Yesterday at 3:11pm · LikeUnlike
Addy Chen ဘာကိစ္စ အကုန်လျောက် လိုက်နေတာလဲ နည
Yesterday at 3:12pm · UnlikeLike ·2peopleLoading...
Nang Nyi ဘုရား.. အများကြီးဆိုတော့ ဖတ်ရင်း သဘောကျတာလိုက်ခ်တာလေ.. ပမာဆိုရရင် လူကြီး လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်း ဘေးနားထိုင်ပီး ခေါင်းလိုက်ညိတ်သလိုပေါ့.. လိုက်ခ် လိုက်ခ်
တီချမ်း August 3, 2011 at 5:28 PM
Nang Nyi https://www.facebook.com/n​otes/nang-nyi/%E1%80%A1%E1​%80%B1%E1%80%90%E1%80%BC%E​1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BA%​E1%80%AC%E1%80%9C%E1%80%8A​%E1%80%B9/227586583949428 ဒါကဝင်ကြော်ငြာတာ
http://nangnyi.blogspot.com/20​11/08/blog-post.html ခုတလော ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးေ...နမိတာ.. မိန်းမတွေရော ယောက်ျားတွေရောကို စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝစေချင်တဲ့အကြောင်းပါ.. ယောက်ျားမို့ စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝရမယ် သဘောထားကြီးရမယ်.. မိန်းမဆိုတာ စိတ်ဓာတ်သေးသိမ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရတာကိုလည်း မနှစ်သက်နိုင်ပါဘူး.. စိတ်ထားပြည့်ဝတဲ့ မိန်းမတွေ များသလို မိုက်ရိုင်းယုတ်ညံ့တဲ့ ယောက်ျားတွေလည်းရှိတာပါပဲလေ.. ကိုယ်ကတော့ မိန်းမ ယောက်ျားရယ် မခွဲခြားတတ်.. လူလို့ပဲ တွေးပါတယ်.. တကယ်ပါ.. ဒီလို ရောက်တတ်ရာရာတွေ တွေးဖြစ်တာက ညတစ်ည ကြုံရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကနေ စပါတယ်.. ဟိုနေ့က အိဖူးနဲ့ နန်းညီ နှစ်ယောက်သား ရွှေဂုံတိုင် လင့်လမ်း မှတ်တိုင်ကနေ coffee circle ကို လမ်းလျှောက်သွားကြတယ်.. ရန်ကုန်က လူတွေကတော့ သိကြမှာပေါ့.. coffee circle ဆိုတဲ့ ဆိုင်က မှတ်တိုင် တဝေးတလံကြီး နှစ်ခုကြားထဲမှာဆိုတော့ တက္ကသီလာမှ ငှားမစီးရင် ရှေ့တည့်တည့်ရောက်ဖို့က ခဲယဉ်းတယ်လေ.. အဲ့ဒိနေ့ညကတော့ ည ၇ နာရီခွဲလောက်.. နေလည်းမပူ မိုးလည်းမရွာ အေးအေးလူလူဆိုပြီး နှစ်ယောက်သား လျှောက်ကြတာ.. မှတ်တိုင်ဘက်ခြမ်း ကားလမ်းကနေ ဟိုဘက်ကားလမ်းကို ကူးလိုက်တဲ့အခါ အဲဒိဘက် ပလက်ဖောင်း ခပ်မှောင်မှောင်အရိပ်ထဲမှာ လူ ၃ ယောက် ၄ ယောက်လောက် ရှိနေတာ အနားကပ်မှ သတိထားမိတယ်.. အော် - ဘာဖြစ်လဲပေါ့.. သူတို့ရှိလည်း ကိုယ်လျှောက်စရာ ရှိတဲ့လမ်း လျှောက်မယ်ဆိုပြီး.. ဒါပေမယ့် အဲ့လူတွေက ကိုယ်တို့ ဖြတ်လည်းသွားရော ပါးစပ်တွေက အငြိမ်မနေ ပေါက်ကရတွေ ပြောပါတော့တယ်.. ပြီးတော့ နောက်နား ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ လိုက်လျှောက်လာကြတယ်.. ရိုးအီနေပြီပဲ ပြောရမလား..
တီချမ်း August 3, 2011 at 5:29 PM
ဒီအနေအထားမျိုး ဖြေရှင်းတတ်တယ်ပဲ ပြောရမလား.. မိန်းကလေးတွေကို ပေါက်ကရ စ နောက်တတ်သော ယောက်ျားအများအပြားကို ခဏခဏကြုံနေရတော့ နှစ်ယောက်သား အထူးအထွေတော့ မတုန်လှုပ်မိ.. ဒါပေမယ့် စိတ်အနှောင့်အယှက်တော့ ဖြစ်တာပေါ့လေ.. အဲလိုနဲ့ ဆက်လျှောက်လာရင်း သူတို့နဲ့ သိပ်တောင် မဝေးသေးခင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ ကောင်လေး ၄ ယောက် ပလက်ဖောင်းပြည့် စီတန်းပြီး လျှောက်လာနေပြန်ရော.. နှစ်ယောက်သားက ခုနကတည်းက စိတ်နည်းနည်း ခု လာတော့ ရှောင်ဖို့ထက်.. မရှောင်ဘူးဟာ နင်တို့ဖယ် ဆိုတဲ့ မျက်နှာပေး မျက်နှာတင်းတင်းကြီးတွေနဲ့ သူတို့ ကြားကပဲ ဖြတ်ဖို့ ကြံရွယ်ပြီး ဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်.. ဒါပေမယ့် အနားကပ်မှ မမျှော်လင့်ပဲ.. "အမ တို့ ပါလား.. ဘယ်သွားမလို့လဲ"လို့ တရင်းတနှီးကြီး နှုတ်ဆက်သံကြားလို့ မော့ကြည့်တော့မှ .. ကိုယ်တို့ တိုက် အပေါ်ထပ်မှာနေတဲ့ ကောင်လေးဖြစ်နေတယ်.. အသက် ၂၀ လောက်ကောင်လေး.. သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်နဲ့.. ကိုယ်တို့ကို မြင်ရင် အရင်က နှုတ်ဆက်လေ့ မရှိပေမယ့် ခုတော့ ညဘက်လည်းဖြစ်နေ.. သူ့ သူငယ်ချင်း ကောင်လေးတွေနဲ့လည်းဖြစ်နေ.. နောက်ဘက်နားက ကပ်ပါလာတဲ့ ယောက်ျားတွေလည်းမြင်တော့ ကူညီတဲ့အနေနဲ့လို့ပဲ ပြောရမလား.. တရင်းတနှီး လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ.. ကိုယ်တို့လည်း ပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီး တမင်ပဲ ခဏရပ်လိုက်.. "ကော်ဖီဆိုင်သွားမလို့.. အောင်ကိုလွင် ဘယ်က ပြန်လာတာလဲ"လို့ မေး.. သူ့ ဘေးက သူငယ်ချင်းကောင်လေးတွေကပါ ရည်ရည်မွန်မွန်လေးတွေ ပြုံးလို့.. ကိုယ်တို့နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ပါလာတဲ့ယောက်ျားတွေ ကြားမှာ သူတို့ ၄ ယောက်က ကာပြီး ရပ်လိုက်ကြသေးတယ်.. ဟိုလူတွေ နဂိုထိုင်နေတဲ့ နေရာမှာပဲ ပြန်ထိုင်နေတာတွေ့တော့မှ သူတို့လည်း နှုတ်ဆက်ပြီး ဆက်လျှောက်သွားလေရဲ့.. အိဖူးနဲ့ ကိုယ် .. စိတ်လက်ကြည်သာစွာ ဆက်ပြီး လမ်းလျှောက်လာနိုင်တာ.. ကျေးဇူးတင်စရာ.. သူ့အတွက်လည်း အပန်းမကြီးပေမယ့် အားလုံးစိတ်ကျေနပ်စရာ ဖြစ်သွားရတာ.. တခါတလေ ကိုယ့်ဘက်က အမှတ်မထင် ကူညီလိုက်တာဟာ သူတဖက်သားအပေါ် အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်.. ကူညီဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့.. လမ်းဆက်လျှောက်ရင်း တွေးမိလာပြန်တာက.. တစ်ရက် ကိုယ်ရယ် မထိုက်ရယ် မဖြူရယ် မိန်းကလေး ၃ ယောက်ထဲ ထိုင်နေရာကို အမူးသမားတစ်ယောက် လာပြီး ရစ်နေတဲ့အကြောင်း.. ခပ်လှမ်းလှမ်းက ယောက်ျားလေးတစ်အုပ်ဟာ သူတို့နဲ့ မဆိုင်သလို မျက်စိကြောင်တောင်နဲ့ ကြည့်နေနိုင်တာ အံ့သြခဲ့ရတဲ့အကြောင်း.. ကူညီဖို့ ရှက်တာလား .. ကူညီဖို့ စိတ်ကူးကိုမရှိတာလား.. ကြောင်တယ်ထင်တာလား.. ဘာလဲမသိလို့.. အဲ့ဒါတွေ တွေးနေခဲ့တယ်.. ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် ကြားရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု.. ယောက်ျားကြီး ၆ ယောက်က .. ကိုယ်ခန္ဓာကို ရင်းပြီး အလုပ်လုပ်စားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို အခကြေးငွေ ၈ ထောင် မပေးဘဲ ကားပေါ်က တွန်းချတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခု.. ကောင်မလေးက သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်တဲ့အခါ.. (ကျမ ဒါနဲ့ လုပ်စားတယ်.. မှန်ပါတယ်.. ကျမ မရှက်ပါဘူး.. ဒါနဲ့ မိဘကို ရှာကျွေးနေတာပါ.. ခုက ငွေလေး ၈ ထောင်ကို မပေးဘဲ ကားပေါ်ကပါ တွန်းချလို့ တိုင်တာပါ) လို့ ပြောတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပေါ့.. ပညာနိမ့်တာ.. ငွေကြေးနိမ့်ပါးတာ.. လူနေမှု နိမ့်တာတွေထက် .. စိတ်ဓာတ်နိမ့်တာက ပိုဆိုးပါတယ်.. စိတ်ဓာတ်နိမ့်တာဟာ ပညာနိမ့်တာနဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်ယူဆပါတယ်.. ခုခေတ်ကျတော့.. ပညာနိမ့်တာဟာ ငွေကြေးနိမ့်တာနဲ့လည်း သက်ဆိုင်လာပြီထင်ပါရဲ့..
ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်လာ.. တွေးမဆုံးအောင် တွေးရတာ အတော်တော့ ပျော်စရာကောင်းပါရဲ့.. တွေးမိသမျှလေးတွေ လျှောက်ဖမ်းရေးလိုက်တာ.. မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ဘာကိုယ် ဘယ်နေ့က ဘာတွေးတယ်တောင် သိတော့မယ်မဟုတ်.. တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက် ဆက်တွေးပြီး လုံးချာလိုက်နေမယ်ဆိုလည်း ဝမ်းသာစရာပေါ့.. See More
By: Nang Nyi
Yesterday at 3:13pm · UnlikeLike · 1 personYou like this. ·
Addy Chen အမ် ဆင်ပန်းရောင်တော် ကိုမှီ ပြီး ကြံ စုပ်ချင်တာလား စိန့် နီကိုးလပ်စ် ကြောင့် ပါးပြောင်ချင်တာလား ဒီလိုလဲ လုပ်လို့ ရသလား သူ့ဆီမှာ ကျတော့ သွားလုပ်လို့မရဘူး
Yesterday at 3:15pm · LikeUnlike
Nang Nyi ပေ့ခ်ျကို လိုက်ခ်လုပ်လိုက် ဒါဆို မန့်လို့ ရသွားမယ်
Yesterday at 3:16pm · LikeUnlike
Addy Chen အိုမရဘူးလေ ရှယ် တခုပဲ ပေါ်နေတာ ကို
Yesterday at 3:17pm · LikeUnlike
Nang Nyi အင်းလေ.. အဲ့ ပို့စ်အပေါ်ဆံးကိုကြည့်လိုက်​.. like ဆိုတဲ့ဟာလေး ပေါ်နေတလိမ့်မယ်..
Nang Nyiိပို့စ်မဟုတ်ဘူး.. ပေ့ခ်ျ ပြောတာ.. မှားလို့
Yesterday at 3:18pm · UnlikeLike · 1 personLoading...
Addy Chen ဖဘ က ပိုစ့်မှာ မှလား မပေါ်ဘူးဆို နေပစေတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ကူးသွားပြီး အဆက်အနေနဲ့ တင်လိုက်ပေတော့
Yesterday at 3:19pm · LikeUnlike
နောက်တခုပြောချင်သေးတယ်။ မိန်းကလေးတွေ အစခံရတာဟာ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်တိုင် အနေအထိုင် အဝတ်အဆင် မတတ်လို့ ဆိုတာလည်း ကိုယ်တော့ သိပ် အစာမကြေဘူး။ မိန်းကလေးတွေ အနေမတတ် ပုံမကျတာတွေ ရှိတာလည်း အမှန်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်ပဲ ထိပါးပါး ထိပါးတဲ့ ယောက်ျားဟာ စိတ်ဓ...ါတ်နိမ့်ကျတာပဲ။ အဲဒါကို မိန်းကလေးဘက်က ဘာဖြစ်နေတာကို ဆိုတာနဲ့ သွားကာလို့ မရဘူး။
နောက်တချက်က စချင်စရာမိန်းကလေးမို့ စလိုက် ထိပါးပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့​ ယောက်ျားမျိုးဟာ တည်တည်တံ့တံ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်း စည်းထားလေးစားလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ ထိပါးဖို့ ဝန်မလေးဘူး။
ယောက်ျားတွေ ပြောနေကျစကားရှိတယ်။ သောက်ရေအိုးထဲနေတဲ့ ရေကို ခပ်သောက်မှာပေါ့။ အိုင်ထဲနေတဲ့ရေတော့ ခြေဆေးမှာပေါ့ဆိုတာ... အဲဒါ ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ သူတို့စိတ်ဓါတ်နိမ့်ပါးတာကို ကာတဲ့ ဆင်ခြေသက်သက်။
အဲဒီမိန်းကလေး သူ့တကိုယ်ရေ ရှပ်ပြာ အိနြေ္ဒမရ ရုံမကလို့ ဘာပဲဖြစ်နေနေ ကိုယ့်အမြင်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အသလွတ်ထိပါးခံရစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။See More
Yesterday at 3:29pm · UnlikeLike · 1 personLoading...
Addy Chen ဟုတ်တယ် ကိုယ်ရေးတဲ့ အထဲမှာ ကျန်သွားတာတွေပဲ အဲ့ဒီယောက်ျားတွေကို ရှပ်ပြာမ သမီးလေးတွေ မွေးစေ့ချင်တယ် အဲ့အခါ ကျ သူတို့ ဘယ်လို သဘောထားမလဲ တုံ့ပြန်မလဲ မြင်ချင်တယ်
Yesterday at 3:36pm · LikeUnlike
Aye Myat Myat Ko အဲဒါလည်း မဟုတ်သေးဘူး။
အဲလို အတန်းအစားက မွေးလာမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဘာဆက်ဖြစ်ဖြစ် ဘာမှ အရေးမပါဘူးပဲ။
Yesterday at 3:37pm · LikeUnlike
Addy Chen ခုနက အပေါ်မှာ ရီတာ ပြောတာနဲ့ သဘောတရားတူတာတခု အခြောက်တွေ ကိုလဲ စကြတာ အခြောက်မို့လို့ စတယ် ဆိုတာထက် အခြောက် ကို လက်ခံပေးနိုင်ရမယ် သူသည် ကိုယ်နဲ့ မတူတဲ့ နောက်တမျိုးဆိုတဲ့ အသိမျိုး ကိုပဲ လိုချင်တာ
Yesterday at 3:37pm · LikeUnlike · 1 personAye Myat Myat Ko likes this.
Addy Chen ကိုယ်ပြောချင်တာ က ကံကြမ္မာ တပတ်လည်လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီ ယောက်ျားတွေ ရဲ့အမြင်တွေက ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲ လာနိုင်မယ် သို့သော် အဲ့တာသည် သူတို့တွေ (ယောက်ျားတွေ) နုစဉ်မှာတော့ လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပြီး ရင့်လာမှ နောင်တ ရတာ ကို လက်ခံမယ်လို့ တော့ မဆိုလိုဘူး
Yesterday at 3:39pm · LikeUnlike
MoehMoeh Oo T Chen - i accept and got what you want to mean .my POV , Men or Women or Gay whatever it depends on their attitude and manner that make and define who you are . is it right T Chen ?
Yesterday at 4:47pm · UnlikeLike · 1 personLoading...
Zar Chi Lwin ယောက်ျား ကောင်းတော့ မောင်းမ တထောင်တဲ့ မိန်းမတယောက်များ ရည်းစားများမိရင် မိန်းမပျက် လောက်ကုို အပြောခံရတာ။ ရှိသေးတယ် ယောက်ျားတွေ နှာဘူးထတာ အဲ့တာ ယောက်ျား စစ်လို့တဲ့။ ယောက်ျားတွေ ရည်းစာများရင် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်တဲ့ မိန်းမတွေ ရည်းစားများတော့ မျက်နှာများတာတဲ့ အရပ်ပျက်တဲ့။
Zar Chi Lwin အဲလိုပွိုင့်တွေရေးထားတာ သဘောကျတယ် တီကအားကိုးရတယ် :))
Melvin Yasha ဟဲလို..ကျနော် ယောက်ျား ပါ.အထက်ပါ comments များ လောက် ယောက်ျား တွေ ဆိုး ၀ါးနေပါ က.. ငခုံးမ ၁ကောင် ကြောင့် ၁လှေလုံး အပုပ်မခံနိုင်..ကိုငိး...ယောက်ျားများ .. behave ur self , orိdont ever call ur self ယောက်ျား again .. တိန်..